I-Starbucks: Ukwehla kwamandla emali nokuncipha komkhiqizo | Martech Zone
NgoLwesibili, Agasti 5, 2008 NgoLwesibili, ngoJuni 23, i-2015 Douglas Karr
Izwe laseMelika lalingayiqondi ngempela ikhofi ayengakwenza ukunambitheka like. Ama-coffee grinds ayenongwe ngamachips isikhathi eside esiza ukukhulisa inzuzo yezinkampani zekhofi. Nganginomngane wami owayesebenza embonini yokupakisha owayesebenza kwimishini eyayigcwalisa futhi ivale iziqukathi zekhofi. Ungitshele ukuthi bashintshe ama-brand ubusuku bonke, kepha abakaze bashintshe ubhontshisi. Sonke besiphakelwa ubufebe obufanayo, sifihlwe emathinini ehlukene ekhofi.
Bese Kufika UKhofi Omkhulu
Cishe ngesikhathi ngiqala ukunaka ukuthi ikhofi lami linambitheke kanjani ngesikhathi engithole ngaso i- INorfolk Coffee & Tea Inkampani. Kuze kube namuhla ngizokutshela ukuthi ayikho into efana nokuthola ubhontshisi othosiwe omusha ngqo kuhhavini.
Uma ucabanga njengamagagasi amasha, indawo yesimanje yama-snobs okuhlangana kuyo kanye ne-hobnob, awusoze waqhubekela phambili eqinisweni. Ingaphakathi lalibukeka njengefektri ehlukunyezwayo… kwakukhona ukumbozwa kwekhofi nothuli lwamantongomane kukho konke owawukubhekile. Uvele wangena, wayala isikhwama sakho sezizathu, waphuma. Angazi ukuthi ubhontshisi uvelaphi, kodwa babethusa kakhulu. Abanikazi bangifundisa ngabenzi bekhofi abasha abebephume ngaphandle bengenazo izishisi kanye nezinqola ezivalekile. Alikho ikhofi elishile. Mmmm.
Ngemuva kwalokho kwafika i-Starbucks
Cishe ngalesi sikhathi, ngathuthela eDenver ngashiya okutholakele kwami ​​okusha ngemuva. E-Denver, ngifune ama-roasters ekhofi kepha bekungafani. I-Starbucks yayifikile edolobheni, noma kunjalo, futhi ngathola ukunambitheka kobhontshisi oshile bama-bucks. Angicabangi ukuthi ngike ngajwayela izindleko noma ukunambitheka kwalabo bhontshisi, noma kunjalo! Bengichitha imali ephindwe kayishumi kunekhofi kunangaphambili!
Ngizijabulele izitolo. Bengikuthanda ukuhlala phansi, ngingena kwi-wireless (ngaphambi kokuthi bayikhokhise), nokwenza umsebenzi othile. Babedlala umculo opholile lapho (ngaphambi kokuthi bawuthengise).
Bese Kufika Izihlalo Ezinzima
Ukuhlanganyela ku-Starbucks lapho beqala ukuvula kwakumnandi kakhulu. Izihlalo ezinethezekile kuyo yonke indawo, okwenza kube yindawo enhle yokubamba umhlangano ongazenzakaleli. Izihlalo ezinethezekile zamema abantu ukuthi bachithe isikhathi esithe xaxa e-Starbucks, noma kunjalo. Ngifundile ukuthi izindawo eziningi zokuthengisa zifaka izihlalo ezinzima ukuze abantu bangahlali isikhathi eside. I-Starbucks ishintshele ezitolo ezinkulu nasezihlalweni eziqinile ezinesihlalo esinethezekile nary nxazonke.
Ngemuva kwalokho kwaqhamuka i-Auto-Shots
Ngikhumbula izimpawu ezinkulu zokukubingelela kuma-bucks:
UJane angahle abe nokuhlatshwa izinwele eziluhlaza nokubhoboza okumbalwa ezindaweni eziyinqaba, kepha njengoba edonsa isibhamu, ubuke njengoba eqhuba ubuciko bakhe. Ubexoxa ngokuthandwa kwakho nangalokho angakuthandi ngaphandle kwezinketho zokuphuza futhi enze izincomo ezimbalwa kuwe ngokuya ngengcebo yakhe yokwazi. Uzizwe upholile ngokuba nje lapho futhi unakwe. Uzizwe ukhethekile.
Kepha imigqa ikhule kakhulu futhi ulayini womhlangano bekufanele ukhule ngokusebenza kahle. Kwalethwa imishini emisha kuleyo ndawo ezenzakalelayo, yafakwa yathela isibhamu. Umlingo ubungasekho… akukho ukungapheleli, akukho sibhamu esithathe isikhathi eside kakhulu, esifushane kakhulu noma ebesinezizathu eziningi kakhulu. Okubi kakhulu wukuthi ama-baristas alahlekelwe ulwazi lwawo lobuciko. AmaBarista ayengewona amaciko angaphansi komuntu opheqa i-burger eNkosini yaseBurger yendawo.
Ngemuva kwalokho Kwafika Ukuthengisa
Ngenkathi umile kulayini, wawusuzungezwe izikhwama zikabhontshisi, izinkomishi, izinkomishi, iziqukathi ezifakiwe, ushokoledi, abenzi bekhofi, imishini ye-espresso, ama-CD omculo, amaphephandaba… Isitolo sasiqala ukubukeka njengesitolo kunesitolo indawo yesithathu, indawo ekude nasekhaya nomsebenzi lapho bengifuna ukuchitha khona isikhathi.
Ngemuva kwalokho kwafika iDrive-Throughs
Olayini bebade kakhulu ukuthi bangaqhubeka nengxoxo. Ama-baristas abematasa kakhulu ukuthi angakwazi. Amashifu ama-baristas amasha afika adlula, i- "Your Barista is" ishiywe ingenalutho. Ukulwa nolayini, i-drive-through yafakwa. Kuyinto elula kakhudlwana. Kuyashesha. Inzuzo enkulu. Amakhasimende amaningi.
Kwakungekho ukukhetha kokunambitheka kokujwayelekile okwenzelwe ukufisa kwakho. Okujwayelekile nje isiphuzo esinconywayo sosuku noma i-upsell kwikhekhe lekhofi.
Cha ngiyabonga. Ngiyacela, okungewona amafutha, isiswebhu, i-grande mocha.
Amadola ayisishiyagalombili, shayela uzungeze.
Ngangilalela umsakazo lapho ngidonsa ngibahambise ngibanikeze imali yami bese ngiya emsebenzini. Akukho imikhonzo, akukho ngxoxo ngesimo sezulu. Mina nje nemoto yami. Umlingo wawungasekho. I-Starbucks, isipiliyoni njengoba ngangisazi, sasishonile.
Iqiniso bekungukuthi angazi ukuthi ngake ngaba khona ngempela eStarbucks ngenxa yekhofi. O - bengidinga ukulungiswa kwami ​​njengawo wonke umuntu, kepha bengithandana nomkhiqizo, isitayela, ubuntu bendlu yekhofi. Ngangikuthanda ukuya lapho ngoba ngangizizwa ngibalulekile. Futhi lapho ngikhokha u- $ 5 ngesiphuzo esikhethekile, ngazizwa ngibaluleke kakhulu.
Endaweni ethile endleleni, i-Starbucks yaqala ukushefa okhethekile ngenzuzo nokusebenza kahle. Bayeka ukwenza me uzizwe ubalulekile. Bayeka ukwenza me uzizwe ukhethekile. Bayeka ukuba abakhethekile. I-Starbucks yindaba emangalisayo - bakhuphule intengo yesiphuzo esijwayelekile futhi basithinta sonke. Kepha abakwazanga ukusigcina. Ukukhula, inzuzo nokusebenza kahle kuthathe izintambo futhi kwagcina kukhipha yonke into ezitolo ebezihlukile.
Okuxakayo ngukuthi iStarbucks yehlise isithunzi sayo, akekho omunye umuntu owenzile. Akekho umuntu ancintisana naye ongene waziphonsela inselelo. Nini Schultz ibuyile ngoJanuwari, benginethemba elikhulu. Kulungile ke.
Bese Kufika Izaphulelo
Namuhla, i-Starbucks iqale ukunikela nge- Isiphuzo esingu- $ 2 ntambama uma uletha irisidi kusukela ekuseni. Ngiyeke ukudla isidlo sasemini kwaStarbucks namuhla ngathola irisidi lami eligxiviziwe ukuthi ngingene kamuva. Angikaze ngikwenze.
Ngicabanga ukuthi sithathe uhlobo lwe-hit isipikili ekhanda, kusho uBrad Stevens, iphini likamongameli wokuphathwa kobudlelwano bamakhasimende. Kulula ukusebenzisa ama-baristas futhi kulula ukuthi amakhasimende akuqonde.
Kulula. Yebo, leyo impendulo. Ngifuna ukukhokhela okulula.
IMHO, Ngicabanga ukuthi uStarbucks ushaye owamanqamu isipikili ebhokisini. Azisabalulekanga ngokwanele ukukukhokhisa u- $ 5 ngesiphuzo, manje sebephendukela ekwehliseni isaphulelo somkhiqizo owodwa omkhulu kakhulu abawukhethile. Usuku olubuhlungu ku-Starbucks.
Bese Kufika Indlu Yekhofi Yangasese
Ngibhala lokhu ngivela endlini yami yekhofi engiyithandayo emhlabeni, okuyisitolo esizimele. Namuhla kusihlwa, u-barista Cassie wami ungihlanganisele isiphuzo esimnandi sokusajingijolo sase-Italy ngenxa yengxoxo engiyithandayo nengingayithandi (ukuthi wazi kahle). Futhi u-Alayna wangenzela isangweji lenkomo eliyosiwe elishubile elimnandi kwi-bagel ethosiwe (hhayi kwimenyu).
Ngibhale konke lokhu okuthunyelwe kwi-wireless yamahhala futhi ngahlala ingxenye yesikhathi esihlalweni esikhulu se-ol 'comfy swivel. UCassy no-Alayna bayaxoxa, ngamagama, namakhasimende futhi bathela isibhamu (futhi baphinde bawavuselele uma made kakhulu noma mafushane kakhulu), bewafaka ngokucophelela ngokususelwa kumswakama.
Kunendaba ebalulekile lapha kwezinye izinkampani. Ngeke nje uqhubeke nokukhokhisa “okhethekile” bese ushwibeka yonke into ebikhethekile. I-Starbucks ayikhiphanga ikhofi lantambama namhlanje ntambama, behlise isithunzi somkhiqizo wabo phambili.
Usuku oludabukisayo lwe Starbucks, kodwa usuku olukhulu lwesitolo sekhofi esizimele. Angikaze ngibuyele emuva ngithole leso siphuzo esingu- $ 2 ntambama.
Tags: i-baristabrandukwehliswa komkhiqizoukwehla kwamandla emali komkhiqizoikhofitekutsengisaizinkanyezi
La “Makhadi” Amabhizinisi Amasha Alapha!
Aug 6, 2008 ku-7: 28 AM
Ngiyazi ukuthi usho ukuthini, ngazama i-starbucks "espresso", ngoba bengicabanga ukuthi ngeke kube khona indlela yokuthi iketanga elikhulu kangaka, elaziwayo lingaba libi kangako. Futhi kwaba njalo. Kodwa ngiya endaweni enhle eSydney, lapho bosa khona ubhontshisi e-cafe, futhi bangazi ngegama. Kuhle.
Aug 12, 2008 ngo-5: 02 PM
Sengibe yiBarista cishe iminyaka eyishumi. Ngisebenze kwesinye sezitolo zekhofi ezihamba phambili engake ngazibonela, futhi ngibonile okwenza isitolo sekhofi sibe sihle. Ngisebenze eStarbucks cishe izinyanga ezimbili ehlobo elilodwa, ngingazi lutho ngakho. Mina wayenakho ukuyeka lowo msebenzi. Lonke ikhono engilitholile kokuhlangenwe nakho kwami ​​njengeBaritsa laphuma ngefasitela lapho ngifaka lelo phinifa. Umsebenzi wami wawungahlangene nekhofi (okwakunyantisa noma kunjalo). Ngingathi cishe u-90% womsebenzi, nsuku zonke, wawunokuningi okuphathelene nokukhuphula imali nokubukeka “kumatasa”.
Angazi ukuthi kungani noma ubani engaya kwaStarbucks ngaphandle kokuthi abamazi kangcono. Kukhona izitolo ezincane zekhofi ezizimele ezinecala lento efanayo nokho. Lapho ngihlala khona, ayikho indawo eyodwa yokuthola inkomishi yekhofi esezingeni elifanele.
Aug 6, 2008 ku-9: 11 AM
Ngithole lokho kunikezwa okufanayo nge-imeyili futhi kwadingeka ngiyeke ngicabange ukuthi ngabe empilweni yami ngike ngaya ku-Starbucks kabili ngosuku olulodwa.
Aug 6, 2008 ngo-12: 24 PM
Ngivumelana ngokuphelele nokuphawula kwakho ngokuhweba kwe-Starbucks. Ngikholwa ukuthi abathengi abaningi laphaya bajabulele "ulwazi" lwe-Starbucks, hhayi ikhofi. Kuyamangaza ukuthi banikeze uquqaba ngokushesha okukhulu kangangokuba kufanele uye kwenye indawo yalolo lwazi manje.
Angikaze ngiyizame iBean Cup, kepha ngisanda kuma yiMonon Coffee Company. Ngincoma kakhulu ukuthi ubadubule uma uhlala endaweni ebanzi ye-Ripple.
Isonto laseDim Sum
Aug 6, 2008 ngo-12: 44 PM
Sengikulungele ukuthengisa amasheya ami eStarbucks. Angicabangi ukuthi bangalulama. Bangaba nokulingana komkhiqizo, kepha lapho beqala ukuvala izitolo eziyizinkulungwane ezimbalwa, ungabona ukuthi i-bubble iqhume.
Kulezi zinsuku ngizosa eyami ikhofi ekhaya. Kushibhile futhi kumnandi.
Aug 6, 2008 ngo-2: 40 PM
Bengijwayele ukusebenzela i-Starbucks… Manje angisayi nakungena kuzo. Ngikhetha i-Coffee Plantation lapho unga-oda noma yini ngendlela oyithandayo futhi ama-baristas azi ukuthi akhuluma ngani, njengoba kufanele! Nabo banezintambo zamahhala zamahhala, izindawo eziningi ezinethezekile zokupaka wena, nesitolo esihle se-ayisikhilimu esiseduze. Isimo sokuwina-win-win.
Aug 6, 2008 ngo-3: 33 PM
Ngingumnikazi wekhofi elincane elizimele edolobheni elincane (iDillard, GA). Nginganikeza amakhasimende ami ukunakwa abakufunayo, (noma ubumfihlo) anginankinga uma behlala kwi-WiFi usuku lonke enkomishini eyodwa yekhofi, ngilungisa ama-oda akhethekile ngendlela abafuna ngayo, bese bebuya kaninginingi! Isimanga esikhulu, eh? Kuleli bhizinisi, njengakuwo wonke amabhizinisi, insizakalo YONKE INTO !!!!
Aug 10, 2008 ngo-4: 50 PM
Ushaya isipikili ebhokisini likaStarbuck ekhanda. Abusekho ubuntu lapho kwakukhona khona obunye. Akusekho srevice njengangaphambili. Esikhundleni sokuvula izitolo eziyizigidi eziyinkulungwane, bebengenza imali elinganayo nje ngokwenza ezinye zazo zibe zinkulu, kanye nabasebenzi. Babecabanga 'ukuhlangana' nekhofi elinomlutha, kepha bazigijimela phansi emhlabathini ngokususa konke okubenza bakhetheke. Ufuna amakhasimende? Baphandle lapho !! Kepha kufanele unikele ngokuthile okungekho omunye umuntu onakho, futhi okungenani wenze sengathi bangamakhasimende amahle kakhulu! Uzophumelela uma nje ucula i-manta… ..nkonzo IS konke.
Aug 6, 2008 ngo-6: 46 PM
Indatshana enhle. Ngempela "ushaye isipikili ekhanda" !! Ngikhetha kakhulu ukuya ezindlini zekhofi ezizimele ezincane. Imvamisa ivulekile kakhulu futhi iphaka isidlo sasemini nedina.
Kukhona isitolo esihle impela eMunising, eMichigan esinesitolo sezincwadi esinamathiselwe. Ungena, ubeke i-oda lakho, futhi ungabhekabheka emashalofini amabhuku ngenkathi ulindile.
Aug 6, 2008 ngo-9: 29 PM
Ngivela esikweni lapho ukuphuza ikhofi kuyinto enkulu, uya emakhulwini ezitolo zekhofi, u-oda iCappuccino, i-Espresso noma iMacchiato ngemali engaphansi kwempunzi, ngikhuluma ikhofi esezingeni elifanele, azikho iziphuzo ezimnandi ezibizwa ngama-shmanzy ezidinga Uhlelo lweRosetta Stone lokufunda i-lingo.
Lapha e-Arizona, i-Starbucks ikuyo yonke indawo enezitolo ezinkulu, esitolo sokudla nakunoma yini enendawo yokupaka. Ngizithola ngimi njalo ekuseni ngiphuza ikhofi ende nomama bebhola lezinyawo abathola ibhulakufesi lezingane zabo nezingane zabo.
I-Starbucks Coffee ayinakho ukunambitheka okungaguquguquki, empeleni iyanambitheka kabi ngaphandle kokuthi uthole i-5 $ Mocha Cappu? ngeKarmeli okuthile.
kungaba isu layo lokumaketha ukunambitha ikhofi elibi elenziwe kabi ukuze ukwazi ukukhuphukela esiphuzweni esingu- $ 5, awu ungakhohlwa isemishi lamafutha we-turkey bacon… lisanda kutsha.
UDouglas, ngiyabonga ngocingo lokuvuka
Aug 6, 2008 ngo-9: 33 PM
Ungithinte yonke indlela ngeposi lakho. Ukubhala okuhle. Ngisebenza ekwakhiweni kwewebhu ngebhange le-mega, futhi ngibona ukufana okuningi kokuncishiswa komkhiqizo. Ngizobe ngidlulisela lokhu kozakwethu.
Aug 6, 2008 ngo-11: 26 PM
Ngiyabonga kakhulu, Eric!
Aug 7, 2008 ku-3: 09 AM
Cishe angikaze ngiye kwaStarbucks ngoba angikaze ngibe ophuza ikhofi futhi kungani ukhokhela i-wifi uma kumahhala kwenye indawo?
Kodwa uma ngikhuluma iqiniso ngicabanga ukuthi inkinga izimakethe zomphakathi. Abatshalizimali bahlala befuna ukukhula futhi abanandaba nokuncane okukhethekile okufunayo ezinkampanini abanamasheya abo. Uma isitoko sabo singakhuli ngenani elikhulu kune-S & P badiliza abaphathi futhi bakhiphe abameli.
Inkinga uma ufika esilinganisweni esithile awukwazi nje ukuqhubeka nokukhula ngezinga elifanayo. Ngesabelo semakethe esingu-95% uzokuthola kuphi ukukhula okungu-10%? Ngakho-ke abaphathi baqala ukusika amakhona, ukushefa izindleko, ukuthola i-cheesier ngezindlela zayo. Futhi lokho kuyiqiniso ikakhulukazi uma umsunguli kanye / noma iqembu labaphathi elinama-ethos eliwinayo lingasekho ekuholeni (bheka nje i-Apple ngezinsuku zikaJohn Sculley.)
Ngakho-ke empeleni akubanga yi-Starbucks ukuzibulala, bekuyisimo sesilo sezimakethe zomphakathi lapho abatshalizimali behlukanise ngokuphelele kunoma yikuphi ukubandakanyeka ekusebenzeni kwenkampani futhi bafune nje okungaphezulu, okuningi, nokuningi.
Kwanele ukwenza ongxiwankulu onemicabango afune ukuhlala eyimfihlo.
Aug 7, 2008 ngo-3: 15 PM
Avume uMike. I-movie enhle (enezinto ezisele kakhulu maphakathi nendawo kepha bengiyijabulela) yi Inhlangano. Umlayezo obalulekile ngemuva kwe-movie ukuthi amaCorporate ayaphila, izinhlangano eziphefumulayo ezikhula kuphela kwinzuzo. Akukho okulungile nokungalungile enhlanganweni, kunenzuzo kuphela noma akunenzuzo. Lokho kuyinto esabekayo ngoba kucishe kulahlwa ukwehluleka ukuthenga umthengi!
Aug 7, 2008 ku-8: 35 AM
Ngivumelana no-Eric, lokhu bekuyibhulogi ebhalwe kahle futhi ebandakanya iphuzu evumelekile. Engifuna ukukwazi ukuthi kungani i-Starbucks yake yaqhamuka kuqala… ingabe abantu abakulangazelela ukuzizwa bekhethekile ukuthi kufanele bakhokhe (okuningi!) Hhayi ikhofi elithile, kodwa ukunakwa ngumuntu owenza ikhofi? Ingabe ukuthandwa nokungathandwa kubaluleke kakhulu kangangokuba kudinga ukuthi bamelwe ekhofi lakho? Ngichithe isonto elilodwa ebhishi noMkhwe wami futhi wenza ikhofi elibi kakhulu njalo ekuseni (Chock Full O'Nuts, kungani ubiza ikhofi lokho?) Futhi lezo zikhathi zokuthula ezixoxa naye zenza lelo khofi ezinye kokuhle engake ngaba nakho. Chitha isikhathi nemali kubangani nomndeni, kuzokwenza uzizwe ukhethekile.
Aug 7, 2008 ngo-3: 12 PM
Amazwana amahle futhi ngiyavuma. Kukhona incwadi lapho uSchultz ekhuluma ngezindlu zekhofi eziba 'indawo yesithathu'. Yindawo lapho sihlangana khona nabangane ngaphandle komsebenzi nangaphandle kwekhaya lethu. Bekujwayele ukuba yindawo yokuphuzela noma indawo lapho kwenzeka khona lokhu, kepha uStarbucks wakususa lokho.
Okuhlangenwe nakho kwami kukhona nabangani nomndeni - kepha imvamisa kusendaweni efudumele kude nekhaya okunikeza imizwa enamandla. Sisezindlini zethu nasemsebenzini wethu nsuku zonke… sidinga kwenye indawo esingaya kuyo. Isikhathi esithile impela, leyo ndawo kwakuyi-Starbucks.
Aug 7, 2008 ngo-12: 12 PM
Futhi awazi ukuthi kunzima kanjani nge-barista yobuciko ukwenza ushintsho olukhulu (ngenxa "yezomnotho") kusuka endaweni yokuphekela indawo lapho angaba nezinwele eziluhlaza, ukubhoboza, nobuciko obuphelele obuzenzekelayo umhlaba -robot we Starbucks… Iyabamba.
Aug 7, 2008 ngo-2: 39 PM
Ngicabanga ukuthi igagasi liyashintsha futhi ngilangazelela ukuba nomaskandi onjengawe ongithela ngelinye ilanga!
Aug 7, 2008 ngo-1: 03 PM
Hah. Uhlala e-Indianapolis. Angikaze ngiye kwi-Bean Cup isikhathi eside.
Aug 8, 2008 ku-11: 06 AM
angikaze ngiye kuma-starbucks. ngithemba ukufa ngingakaze ngibe nesiphuzo sekhofi esingama- $ 5 kusuka ku-starbucks.
ngiphuza ikhofi. mnyama. I-yuban ibonakala ilungile ngokwanele esitolo sokudla. nebhodwe elivela ekuseni lihle noma kunini phakathi nesikhathi sosuku lapho uliphinda khona ku-microwave.
ngicabanga ukuthola umenzi wekhofi ocindezela isiFulentshi. lelo kuzoba usuku lapho nami ngingumuntu othanda ikhofi.
Aug 8, 2008 ngo-2: 47 PM
Kanye nokuba sesidlangalaleni, kuyingxenye ye-high tech / high touch conundrum. Futhi kuyinkomba yokuthi umphakathi wangempela ubaluleke kangakanani kubantu. Amaklayenti ethu eRubicon afuna ukuxhumana nezeluleko kanye nokuhlakanipha nendlela yokwenza lapho esebenza nathi.
Nakhu ukuthatha kwami ​​emphakathini - http://tinyurl.com/58skzn
Aug 8, 2008 ngo-2: 49 PM
Iposi Elikhulu. Lokhu kuphenduke enye yama-blog wami engiwathanda kakhulu!
Ngiya kwaStarbucks kuphela lapho ngikhohlwa ukusetha ibhodwe lami lekhofi izolo ebusuku. Umzila wokushayela ulula ekuseni ekuseni. Into eyodwa ongayisho nge-wifi yamahhala ukuthi akuyona yonke i-Starbucks enayo. Ngiye eWifi ngaya komunye umgwaqo ngesonto eledlule futhi ngaphoxeka kakhulu. Ngikholwa ukuthi iStarbucks ingenye yezinkampani eziningi ezivele zalahleka indlela ngenkathi zikhula ngokushesha.
Manje sezijwayelekile nje.
Aug 8, 2008 ngo-4: 28 PM
Kwazise ukuncoma, Kyle!
Aug 10, 2008 ku-1: 42 AM
Indatshana emangalisayo. Kunesifundo esijulile nesithobayo kulokhu kuwo wonke amabhizinisi afuna ukuqhubeka nokukhula ngokushesha okukhulu nangaphezulu… .. acebile futhi acebile. Kwakuyi-tonite enhle yezingxoxo eNdebeni yeBhontshisi. Bengingazi, ukuthi imibuzo yami ezintweni zeWebhu izongibhekisa kolunye ulwazi oluhle lwangempela. Ngiyabonga.
Aug 10, 2008 ngo-11: 48 PM
Uqinisile impela. Angikaze ngibe umlandeli weStarbucks kwasekuqaleni. Ngesikhathi umuntu efika eTerre Haute, bekuvele kuyilolo chungechunge lobuhlanya. Kuwe uhlala eTerre Haute, shaya iCofi Grounds noma iJava Haute. Zombili zisengabanikazi bendawo futhi zenza isihogo esisodwa sekhofi elingaphelele. Noma kunjalo noma kunjalo, ngikubonile ukuhweba kwalaba bobabili. Bobabili bafuna ukuncintisana ne-Starbucks ezingeni elithile futhi angibasoli. Kunezimali ezintathu lapha manje uma kuqhathaniswa nezitolo ezine zekhofi zendawo. Leyo yiphayi elincane okufanele lisikwe.
Aug 11, 2008 ngo-11: 19 PM
Kufana neqembu lakho olithandayo. Ekuqaleni, uyathanda ukubabona bedlala ngoba badlala endaweni ongaya kuyo uzijabulise nabangani neziphuzo futhi badlala umculo omnandi. Kuzwakala sengathi bafaka uhlelo olwenzelwe wena nje. Ngemuva kwalokho bathola ukwaziswa kancane futhi uyajabula ngoba banevidiyo yomculo futhi bathengisa amanye ama-albhamu ambalwa. Bese kuyamunca ngoba izingoma zabo zibhalwe ngokubambisana ngabadidiyeli abakhulu futhi badlala izinkundla ezinkulu lapho umsindo usabeka khona futhi indawo yokupaka ihamba ngesivinini esingamamayela ama-5 ukuya endaweni. Konke okuhle kuyadlula… kujabulele ngenkathi ungakwazi!
Aug 12, 2008 ku-7: 26 AM
I-athikili yakho ikhona khona lapho. Awusekho umuzwa weStarbucks, futhi angikaze ngithande ngisho nobhontshisi oshile ekuqaleni.
Ngakho-ke mhlawumbe isitolo esikhulu, esinesibindi sendawo yekhofi sizovulwa kwenye yezindawo i-Starbucks ephuma kuzo, futhi ibakhombise ukuthi kufanele yenziwe kanjani!
Aug 12, 2008 ngo-1: 41 PM
Nami ngiyazithanda “izitolo zangempela zekhofi” (i-Starbucks, okungenani kimi, ayifaneleki). Ngihlala kaningana… bonke bakhonza i-Certified Fair Trade, ikhofi ekhulile emthunzini. Kunokuthile okucishe kube imilingo ngokuzungeza kwakho ngenkampani enkulu, ikhofi elihle (lokho kungaphezu kwentengo efanelekile futhi akuwonakalisi amahlathi emvula KANYE kusekela abalimi), futhi kungenazintambo… ngenkathi uhleli esihlalweni esidala kodwa esintofontofo… IZULU!
Aug 13, 2008 ku-5: 26 AM
e-US ngangivame ukuphuza ikhofi kuphela e-Starbucks. Ngiyawuthanda umkhathi
Aug 13, 2008 ku-11: 13 AM
Yebo, angikaze ngiyithande ngempela i-Starbucks, kepha bekungcono kakhulu ngaphambili - yize izitolo zaseMassachusetts zonke zibonakala ziyindlela oyikhumbulayo. Kunoma ikuphi, ngicabanga ukuthi kuyasiza ukugcina izitolo ezincane, zibuthakathaka njengoba zivame ukwenzeka.
Aug 13, 2008 ngo-11: 54 PM
Ngivela eWashington State, ezweni lezitolo ezi-5 zekhofi kuwo wonke amakhona. I-craze yabo entsha ezindaweni ezincane yi-Woods Coffee shop. Banobuthongo obuthokomele ngasendaweni yomlilo ehlanganisiwe kanye nokuhlanganiswa okukhulu kwemidlalo yebhodi. Kunamaqembu abukhoma ngezimpelasonto futhi yebo ungenza umsebenzi wakho lapho.
I-Starbucks ayisekho phezulu, ilula kuphela. Maduze ngokwanele ukuba lula kwabo kuzogqoka ngokuphelele. Angikaze ngivakashele i-Starbucks ezinyangeni. Angikwazi ukubekezelela iziphuzo zabo ezifudumele nokuhambela kwabo okunyanyisayo. Akekho umuntu ofunela ikhofi langempela… Bangase benze kangcono uma bevuma ukuthi benza amaswidi ngempela enkomishini egcwele umkhovu.
Aug 14, 2008 ku-1: 35 AM
Ngikhumbula lapho ama-starbucks eqala ukuza lapha. Kwakunezitolo eziningi ezincanyana zokuma ukuze bathole ikhofi nesemishi, futhi bazishiya zingasebenzi.
I-Starbucks yayiphathelene nokubeka uphawu nokuxhashazwa. Buza noma iziphi izakhamizi zaseNew Hope, PA ukuthi zazizwa kanjani lapho ama-starbucks onke kodwa ephoqa ukukhipha isitolo sendawo ukuze anikeze izivakashi nezivakashi.
ama-starbucks aphumelele ngokunakekela abantu abafuna okuhlukile, bakhule ngokuzizwa bekhuphukile futhi bekhethekile, bese bezinquma umphimbo ngokuvumela konke ukuthi kuye emakhanda abo. Manje kuyisitatimende semfashini nenye ilebula lomklami.
Bheka nje inani lama-iPhones ozozibona lisetshenziswa lapho, kanye nenani lezikhwama zabaklami, nama-macbook. Akuthathi isikhathi eside ukuthola ukuthi iningi labantu liya lapho ukukhombisa ukuthi bapholile kangakanani. Iningi ngeke lazi i-espresso ehloniphekile noma i-cappuccino uma enye i-barista enethalente enezinwele eziluhlaza nokubhoboza ikuphonsa ebusweni bayo ngokuba nemfashini ecasulayo.
Aug 14, 2008 ku-8: 52 AM
Yindaba enhle leyo - opharetha bezitolo ezithile kufanele benze ukufundwa okudingekayo kwabasebenzi babo.
Angikaze ngithole ukunambitheka kweStarbucks, ngincamela ukufaka phansi u- $ 1.50 ngenkomishi enkulu yekhofi elikhanyayo lePanera Bread. Futhi, iPanera ayikhokhisi ukufinyelela kwe-inthanethi, okwenza izitolo zabo indawo ekahle yokuzijabulisa.
Ngabe iPanera iphelele? Cha. Njenge-Starbucks badlula ekushintsheni kwabasebenzi nabaphathi njalo ngamazinga ekhwalithi ahlukahluka usuku nosuku.
Ngicabanga ukuthi yingakho ngincamela ukwenza nokuphuza ikhofi lami ekhaya.
Aug 15, 2008 ku-10: 38 AM
UDoug, isifinyezo esihle engivumelana naso kubo bobabili umthengi nomthengisi.
Izingane zami ezimbili kube ezakwa-barista (hhayi kwa-Starbucks) futhi lesi yisihloko esishisayo labo abangaphakathi kwenkampani abangakwazanga ukusiqonda. I-Starbucks (nazo zonke izitolo zekhofi) kufanele zigxile kokuhlangenwe nakho okuphelele. Ngaphandle kwalokho, kungani ukhokha amanani aphezulu?
Aug 15, 2008 ngo-4: 33 PM
ME: OWAYEYI-SEATTLE STARBUCKS BARISTA
Okuthunyelwe okuhle uDoug! … Kuyafana naseSeattle. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi kuhlala kunezitolo zangempela "zangempela" zekhofi. Vele, i-Starbucks inkulu futhi ihlale imatasa, kepha insizakalo yabo nekhwalithi yabo iyaqhubeka nokuwa.
Aug 15, 2008 ngo-10: 37 PM
Ukuhlaziywa okuhle kokuthi umkhiqizo wakhukhulwa kanjani, futhi ngikholwa ukuthi, ulahlekile. Kade ngikubuka lokhu eminyakeni embalwa edlule. Lokho okwake kwaba yinto eyenza i-Starbucks ehlukile yalahleka njengoba leli chungechunge lalinganaki kakhulu indlela amakhasimende aphathwa ngayo. Kwaba ngumuntu ongenamuntu, isichasiso sokugcina esishayela. Ungashayela ngeMacDonalds bese uthola ikhofi. IStarbucks yayingaseyona “indawo yesithathu.”
Siyabonga ngokuhlaziya okubukhali.
Aug 16, 2008 ngo-2: 38 PM
Ngiyi-barista eStarbucks. Ngisebenze lapho iminyaka emi-2 futhi ngibala… usuku lwami lokugcina nguMgqibelo olandelayo. Angigcini nje ngokuya esikoleni, kodwa ngigula i-Starbucks. Ngingadlulisela esitolo esisendaweni engizofunda kuso isikole, kodwa anginaso neze isifiso sokwenza lokho.
Ngangiwuthanda umsebenzi wami. Bengithanda isitolo sami. Ngangithanda i-Starbucks. Ngaqala esitolo esihle sokungenisa izivakashi eGresham, OR. Kwakumatasa impela, kepha ngangisenaso isikhathi sokwazi nokujabulela amakhasimende ami, futhi ngangisenaso isikhathi sokwazi nokujabulela engisebenza nabo. Ukungakhulumi ngomphathi wami kwakungomunye wohlobo. Ngemuva kwalokho kwadingeka ngishintshele esitolo esiseVancouver, WA. E-Vancouver, ngisebenza esitolo esidume kabi ngaso sonke isikhathi "esihlala simatasa ngempela" (ngithola lokho kuwo wonke umuntu engitshela ukuthi ngisebenza kusiphi isitolo). Ukuba matasa ngempela kungukubhalwa phansi futhi siyisibonelo seStarbucks okhuluma ngaso esihlokweni sakho, futhi ngibe nokwanele. Kunezitolo ezinhle zekhofi zendawo, futhi ngiyakujabulela ukuya kuzo kunokuya enkampanini yami! Lolo wusuku oludabukisayo lwe-Starbucks lapho abasebenzi bakho kunokuthi bangakuniki isikhathi sosuku.
Ekuzivikeleni kwami ​​nakwamanye ama-baristas e-Starbucks, sisebenza kahle nalokhu esikunikezwayo. Hhayi ukushaya uphondo lwami, kepha ngemuva kweminyaka emibili, sengiyi-barista enkulu. Ngiyazikhathalela iziphuzo engizenzayo namakhasimende engiwanikeza wona. Ngizinika isikhathi sokuxoxa namakhasimende ami futhi ngibazi lapho besefasiteleni lami lokushayela noma e-counter yami ngenkathi ngise-bar. Ngiyazi ukuthi ama-baristas amaningi athathe isimo se- "burger-flipping" futhi abeke eceleni uthando lwabo lomsebenzi, kepha abaningi abakwenzanga futhi yibo ababambe okusele kwe-Starbucks ndawonye.
Ngokwami, ngilahle ukholo lwami nothando lwami nge-Starbucks hhayi kuphela ngoba isitolo sami siyisitolo esisheshayo, kodwa ngenxa yendlela esiphathwa ngayo njengabasebenzi. Mhlawumbe kusitolo sami nje kuphela, kodwa kubi impela lapho futhi ngenxa yaso futhi sigcina njengaso, iStarbucks isiphenduke umkhumbi ocwilayo. Ngisebenza naseRed Robin futhi ngilashwa kahle kakhulu lapho. Eqinisweni ngiyawuthanda umsebenzi wami lapho. Ngiyakuthanda ukuya emsebenzini futhi kungenza ngibe isisebenzi esingcono ngenxa yakho.
Ngikwenze konke ukuqeqeshwa nokugculiswa okwenziwa nguWoward Schultz ekuqaleni konyaka futhi ekuqaleni ngangiyi-gung-ho, kepha selokhu ngaphelelwa ukholo lwami ngase ngishiya umsebenzi wami ngokuphelele. I-athikili yakho ngeyokuthi uSchultz kufanele ayibone. Bese mhlawumbe kuzoba ucingo lokuvuka aludingayo.
Uyazi ukuthi uzitshela kanjani ukuthi uyafunda ngoba unezincwadi zakho zokuqinisekisa ezivulwe phambi kwakho? Kepha empeleni uchofoza ku-Stumble upon ukuthola okuthunyelwe okuthakazelisayo ongakufunda?
Yebo kahle, ngithole eyakho futhi bekufanele ngibhale ngikutshele ukuthi ngiyijabulele kakhulu. Ngiwunikeze isithupha, ukuze abantu abaningi bakwazi ukuwuthola futhi bakuthokozele futhi.
May 20, 2009 ku-5: 36 AM
Uyazi okungimangazile. Ulunge kangakanani umugqa weMc Cafe. Ikhofi likaMc Donald ngentengo engaphezu kuka- $ 3 inkomishi libonakale lincane kakhulu.
Ngemuva kokuyizama ngixhumeke ngokudabukisayo futhi bengilokhu ngiya lapho ngokwengeziwe njengasekupheleni kwesikhathi.